Adla inhlabathi amadolo abeSafa bencenga oweBafana
UPITSO Mosimane okuvela igama lakhe kulabo okuthiwa iSafa ikhuluma nabo ukuthi bazoqeqesha iBafana Bafana Isithombe: BACKPAGEPIX
Zakhele Xaba | April 29, 2021
INHLANGANO eyengamele ibhola kuleli, iSouth African Football Association (Safa), izimisele ngisho “ukumxebula” enkontilekeni neqembu lakhe umqeqeshi efuna azoqeqesha iBafana Bafana.
Ngempelasonto edlule, iSafa bekufanele imemezele umqeqeshi ozongena endaweni kaMolefi Ntseki emxoshe emasontweni edlule. Lokho kugcine kungenzekanga, le nhlangano yabika ukuthi ivinjwe yimigomo yeCovid-19.
Lokhu kuholele ekutheni iningi likholwe wukuthi umqeqeshi olandelayo uzoba ngowangaphandle kwelakuleli.
Kubaqeqeshi obekuthiwa baphambili ekuthatheni umsebenzi wokuqeqesha iBafana kukhona uCarlos Quieroz wasePortugal, Pitso Mosimane wakuleli noHarve Renard waseFrance owawina i-Africa Cup of Nations (Afcon) neZambia ngo-2012 ne-Ivory Coast ngo-2015.
Kodwa kuvele ukuthi uQuieroz noMosimane sebenqabile ukuqeqesha iBafana. Lokhu kuthiwa kuholele ekutheni iSafa icele uNgqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, ukuthi ayincengele uMosimane oqeqesha i-Al Ahly e-Egypt.
Umthombo ongaphakathi kwiSafa, uthe babanjwe yinkontileka yomqeqeshi abamfunayo ekutheni bamemezele ngempelasonto edlule.
"Okwenze singamemezeli umqeqeshi ngoMgqibelo wukuthi aziphelanga izingxoxo mayelana nenkontileka eqenjini aliqeqeshayo. Bobathathu banezinkontileka namaqembu athize. Kufanele silungise lokho kuqala. Bekungeke kulunge ukuthi simemezele umqeqeshi osaqashwe kwenye indawo," kusho umthombo.
"Engingakusho wukuthi kulaba baqeqeshi ukhona owaseMzansi kodwa angikwazi ukudalula igama ngoba sisayine phansi ukuthi ulwazi olunjalo singalukhiphi. Konke kuzoncika ekutheni sivumelana ngokuthini nomqeqeshi neqembu lakhe. Kungenzeka asule noma siphoqeke ukukhokhela inkontileka yakhe, simkhiphe kuyona."
Okhulumela iSafa, uDominic Chimavhi, izolo othe uphuma emhlanganweni nomengameli uDanny Jordaan nesikhulu esiphezulu uTebogo Motlanthe, ucele ukubuye athintwe. Ngokuhamba kwesikhathi ucingo bese lukhala aluvale.
I-website, iKingfut.com yase-Egypt, ibike ukuthi iSafa ihlela ukucela esinye isikhulu esingaphezulu kukaMthethwa kuhulumeni ukuthi siyoncenga uMosimane ngemuva kokuthi lo mqeqeshi emchithile.
Ngo-2019, uMosimane esakwiMamelodi Sundowns, watshela abezindaba ukuthi noma angasithatha isikhundla sokupheka iBafana kodwa abalandeli beKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates ngeke bamthande kwazise yibona (abaningi) abeseka iqembu lesizwe.